Bagxeka ezokuphepha kwaZuma | IOL Isolezwe
Bagxeka ezokuphepha kwaZuma
Isolezwe / 30 January 2013, 10:52am / SIMPHIWE NDWANDWE noCELANI SIKHAKHANE
UNobhala we-Cosatu eKZN osola i-NFP ngokuba ngumdayisi ebudlelwaneni enabo ne-ANC.
ICOSATU izwakalise ukukhathazeka ngokusetshenziswa kwemali efinyelela ku-R206 million ukuze kuqiniswe ezokuphepha emzini kaMengameli Jacob Zuma oseNkandla.
Lokhu iCosatu ithe kufana nokukhombisa ukungabi nazwelo enhluphekweni yabasebenzi, abanhlwempu nabangenamakhaya. UNgqongqoshe wezemiSebenzi yoMphakathi, uMnuz Thulas Nxesi, wethule umbiko wophenyo ngempelasonto lapho ebechaza ngalokho okutholwe uphenyo obelenziwa nguMnyango wakhe mayelana nodaba lwaseNkandla.
UNxesi uthe uMbuso ukhiphe imali elinganiselwa ku-R70 million ukuze kuqiniswe ezokuphepha kwaZuma njengoba kwenzeka komengameli bamazwe omhlaba.
ICosatu ithe iyakuzwa ukuthi akukho okutholakele okukhombisa ukuthi umuzi kaZuma wakhiwa ngemali yabakhokhi bentela.
Esitatimendeni esikhishwe ngoyikhulumelayo, uMnuz Patrick Craven, kuthiwe yize kwesekwa ukuqiniswa kwezokuphepha emzini kamengameli kodwa imali esetshenzisiwe iqeda amandla.
ICosatu ithe ngeke nanini yeseke ukuthi kusetshenziswe imali engaka kumuntu oyedwa ekubeni elakuleli lisagubuzelwe yizinkinga eziningi kangaka zenhlupheko namaholo aphansi abasebenzi nokungabi bikho kwezindlu ezaneleyo zabantu abangondingasithebeni.
“Labo abathintekayo ekutheni kusetshenziswe imali engaka kumele bathathelwe izinyathelo kungakhathaleki ukuthi ngabaholi bezombusazwe abanegama. Inkulu kakhulu imali esetshenzisiwe, kumele kube khona ababoshwayo,” kusho uCraven esitatimendeni.
Ekhuluma nesiteshi somsakazo iSA FM ngoMsombuluko uNxesi uthe nakuba zingekho izinkomba zokuthi kukhona okungahambanga kahle ngemali esetshenzisiwe kodwa kukhona okusazophenywa ukuthi bayithola kanjani imisebenzi yokuthuthukisa umuzi kaZuma.
Ugcizelele ukuthi elakuleli ngeke lizibeke phansi uma kumele liqinise ukuphepha kukaMengameli.
Umbiko mayelana nalolu phenyo awukhishwanga emphakathini kanti uNxesi uthe ngeke uze ukhishwe ngoba konke okuthinta ezokuphepha kukaMengameli kumele kube yimfihlo. Lokhu kugunyazwa ngumthetho obhekele ukuphepha komengameli kuleli.
Esikhalweni esiqubuke emaqenjini aphikasayo sokuthi uhulumeni ubhace ngomthetho wobandlululo ukuze ugubuzele okungahambanga kahle ngokulungiswa komuzi kaZuma, uNxesi uthe uma kusekhona lo mthetho akukho abangakwenza kodwa kumele kulandelwe wona.
n Khonamanjalo, iCosatu KwaZulu-Natal, ikhwele yadilika kwi-NFP iyisola ngokudala uthuthuva noqhekeko esivumelwaneni somfelandawonye ne-ANC kulesi sifundazwe.
ICosatu ikusho lokhu esitatimendeni ebesichaza ngezinye zezinto ebezidingidwa emhlanganweni wayo wesigungu esiphezulu sesifundazwe.
UMnuz Zet Luzipo, onguNobhala weCosatu eKZN, uthe abeneme neze ngokuziphatha kwe-NFP kulobu budlelwano enabo noKhongolose.
“Lokhu okwenziwa i-NFP kokubukela phansi isivumelwano enaso ne-ANC kukhomba ukuthi i-NFP ingumdayisi futhi kuningi okudingeka kwenziwe,” kusho uLuzipo.
Ukusho lokhu ngemuva kokuthi uNgqongqoshe wezokuBusa nokuBambisana esifundazweni uNksz Nomusa Dube ethathe isinqumo sokuwuhlakaza umasipala waseMbabazane wawuphuca amandla .
Lokhu ukwenze ngemuva kokukhala kwe-ANC ngokuthi ifuna angenelele awuthathe lo masipala ubengaphansi kukahulumeni wesifundazwe ngoba kuningi okungahambi kahle kuwo.
Lo masipala ubusuphethwe i-NFP ngemuva kokuthi yakhipha iMeya ye-ANC noSomlomo ngevoti lokungabethembi ilekelelwa yi-IFP ne-DA.